Talooyinka ugu fiican ee laga soo qaato Adeegyada Dijital ah
Twitter waa mid ka mid ah mida ugu wanaagsan ee caanka ah ee warbaahinta bulshada. Waa hab sahlan oo lagu heli karo taageerayaal badan, farriimo dheeraad ah, iyo saamiyada internetka. Iyada oo la wadaagayo macluumaadkaaga bogga Twitter, waxaa laguu xaqiijin karaa inaad hesho aragti farabadan, oo ku saleysan tirada taageerayaashaada. Twitter wuxuu u taagan yahay fursado badan oo suuq-geyn ah waxaana uu bixiyaa fursado kala duwan oo loo qeybin karo waxyaabaha, ka qaybgelinta dadka internetka, iyo horumarinta astaantaada. Halkaan, Artem Abgarian, oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka Sare oo ah Maamulaha Guud ee Macaamilka, ayaa ka wada hadlay qaar ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee lagu helayo qiimaha badan ee tweet-ka iyo xisaabaadka warbaahinta bulshada.
Jadwalkaaga badanaa ku qor
Waa inaad fiiro gaar ah u leedahay jadwalkaaga boostadaada iyo tweet-yada la xidhiidha sawirada waqtiga ku haboon - giochi gonfiabili da giardino per bambini. Mid ka mid ah qaladaadihii ugu weynaa ee aan sameyno waa inaanan wadaagno jadwalkeena oo ha sii wadi doonin xisaabtahayaga Twitter. Waxaa muhiim ah in la wadaago waxyaabo iyo waxqabadka seddex illaa afar goor maalintii si dad badani u soo jiito farriimahaaga. Tani waxay kuugu ballanqaadeysaa inaad kordhiso tirada dadka raacsan Twitter-ka oo awood u leh inay si wacan u faafiyaan eraygaaga. Waxaa aad loogu talinayaa in aad sameysid jadwal saacad kasta si aad u sii socotid taageerayaashaada
U samee bog cusub oo leh liisas cusub
Waxyaabo kale oo aad sameyn kartid waxay abuureysaa hal ama laba bog oo leh liisas cusub oo cusub iyo waxqabadka. ugu dambeyntiina waxaad heli doontaa taageerayaal badan oo Twitter ah, taas oo kordhinaysa muuqaalkaaga iyo kalsoonidaada bogga internetka.Hoggaaga boggaagu wuxuu noqon karaa mid kasta ama mawduuc kasta, oo ku saleysan danahaaga iyo shuruudaha dhagaystayaashaada.
Tilmaamaha dib u eegista Twitter
Haddii aad aaminsan tahay in marxaladda wadaagida marba mar ku jirta bogga Twitterka ku filan, waa inaan kuu sheego inaad qalad aad u xun sameeyey. Khabiiro tignoolaji ah oo kala duwan iyo suuqyeyaal farabadan ayaa ku andacoonaya in boggaga Twitter iyo Facebook ay muhiim u tahay helitaanka calaamad muujinaysa cidhib tirka internetka. Sidaa darteed, waa inaadan joojin mawduuca marka la wadaago. Taa bedelkeeda, waa inaad wadaagtaa waxyaabaha wanaagsan ee hadda iyo ka dib si loo hubiyo in heerarka ka qayb qaadashada isticmaaluhu uu la socdo oo dhan.
Iska ilaali saamiga soo socda ee raacsan
Looma baahna inaad ka walwasho saamiga ku xigga ee soo socda. Taa baddalkeeda, waa inaad si adag u shaqeysaa oo aad sii wadatid waxyaabo cusub oo ku saabsan Twitter, iyada oo aan loo eegayn inta qof ee aad heysato ee internetka ah. Ka taxadar in aad ka foojignaato isticmaalkaaga isticmaalayaasha 'engagement' intii aad ka hubin lahayd is-xigeenka soo socda ee ku xigga mar ama laba jeer maalintii. Halkaan halkan iigu sheeg in ay hubaal tahay in ay sii kordhin doonto joogitaankaaga warbaahinta bulshada oo aad calaamad u noqon karto indhahaaga Twitter-ka ah ee noloshaada ah.
Ugu dambeyntii, waxaan jeclaan laheyn inaan sheegno in ay jiraan tiro barnaamijyo ah oo barnaamijyo ah iyo qalab waxtar u leh tayada taageerayaashaada. Waxaad isticmaali kartaa qalabkan si aan u habbooneyn oo xakamayn xisaabaadka been abuurka ah. Hubi in dadka raacsani ay yihiin kuwo dhab ah oo sharci ah si tayada boggaaga iyo sidoo kale joogitaankaaga warbaahinta bulshadaada lagu hayo illaa dhammaadka.